Bathokozisa abazali e-SBS | News24
Bathokozisa abazali e-SBS
USiphesihle Ngcobo, u-Amy Lourens, u-Chloe Hinds, u-Hannah noBlevins, Jaydene Eke isithombe : sithunynelwe
ABE sikole i-St Benedict eMariannhill baqinisekisa ukuthi abafundi babo bahlezi bethokozile ngaso sonke isikhathi ngokuba nemicimbi eyehlukahlukene.
Okhulumela i-St Benedict uNks Shareen Gould uthe: “Isikhathi sokuqala konyaka e-St Benedict sihlezi simatasa kodwa lokho akusivimbi ukuba sithokozise abasebenzi, abafundi nemindeni yabo ngokuba nemicimbi eyehlukene.
Njalo mekuqala unyaka kule si sikole sihlezi sino mcimbi yokuba abazali babafundi nothisha bazane kangcnono. Lo mcimbi uzobe usesikoleni kulama sonto alandlelayo lapho kuzobe kudliwa inyama eyosiwe nezinye izidlo ezi nambithekayo.
Lokhu kuzokwenza ubudlelwano babazali nothisha buqine ukuze sizokwazi ukubambisana emfundweni yabafundi.”